လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည် Free Country | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည် Free Country
လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည် Free Country
Posted by Ma Ma on Dec 14, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 49 comments
Free Country ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာ……..
နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်နေကြတဲ့ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟတွေ အလည်ပြန်လာလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာတော့ နိုင်ငံခြားရောက်နေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေ မိသားစု ပြန်လာပါတယ်။
မိသားစုလိုက်မို့ လည်ချင်တာ ၀ယ်ချင်တာတွေ လိုက်ပို့ရင်း……
သူတို့ရဲ့ ၇နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သားလေးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ခုမှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရောက်လာတဲ့ ကလေးမို့ မြန်မာပြည်ဆောင်းတွင်းကို ပူလို့ဆိုပြီး အော်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လျှောက်သွား စားသောက်ရတာကိုတော့ အတော်ပျော်နေပုံ ပေါက်ပါတယ်။
ကလေးနဲ့စကားပြောရင်း မြန်မာပြည်ပြန်လာတာ ပျော်လားလို့ မေးကြည့်တော့…
ဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ Free Country လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်လည်း E မကျွမ်းသူမို့ သူ့ကို အင်တာနေရှင်နယ် ဘော်ဒီလန်းဂွေ့တွေနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရာတာမို့ အံ့သြသွားမိပါတယ်။
ယူအက်စ်က Free Country မဟုတ်လား။
မြန်မာပြည်က ဘယ်လို Free Country ဖြစ်မှာလဲ လို့ ပြန်မေးမိပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကလေး ပြောလိုက်ပုံလေးက….
ကားကို မတ်တပ်စီးလို့လည်း ရတယ်။
လမ်းကိုလည်း ကူးချင်တဲ့နေရာက ကူးလို့ရတယ်။
အမှိုက်ကိုလည်း လွှင့်ပစ်ချင်သလို လွှင့်ပစ်လို့ရတယ်။
Very Free ပဲ။
အဲဒီ အရသာကို ကြိုက်သတဲ့။
အမှိုက်ကိုလည်း ပစ်ချင်သလို ပစ်လို့ရတယ်။
ကိုယ်ရရှိခံစားနေရတာတွေကို သိကြ တန်ဖိုးထားတတ်ကြစေဖို့
အင်း လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည်မှာ လစ်လပ်သောသူ အများအပြား နေကြတာပေါ့ အမ မမ ရေ။
ဘာလစ်လပ်သောသူလဲလို့ မေးခဲ့ရင် အဖြေကတော့ အသိစိတ်ဓာတ်တွေပေါ့ဗျာ။
ကျမပြောချင်တာကို တိုတိုရှင်းရှင်း လိုရင်းရောက်အောင် ပြောပေးလိုက်နိုင်လို့ Best answer ရွေးလိုက်ပါတယ်။ :hee:
ကြိုတ်တယ်ဗျို့ မြန်မာနိုင်ငံဖရီး ကန်းထရီး
ကမ္ဘာ အလွတ်လပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့လောကကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏
ဒါပေမယ့် နောက်ဘ၀တွေမှာဆိုရင်တော့ နတ်ပြည်မရောက်ရင်နေပါ့ မြန်မာနိုင်ငံလာပြီး
လူပြန်မဖြစ်ရင်တောင်မှ ကောင်းမှုကုသိုလ် လုပ်ခဲ့သမျှလေး ကျေနပ်ပါ၏ ၀မ်းမြောက်မိပါ၏။
ကြည့်ရတာ သဂျီးကွန်မန့် မတက်ခင် ရေးလိုက်တာမို့ထင်တယ်။
ဆုတောင်း ပြောင်းရင် မှီသေးတယ်။
Chicago Tribune	– ‎19 minutes ago‎
NEWTOWN, Conn.—. A shooting ataConnecticut elementary school today left 26 people dead, including children and adults, according to reports.
အခုဘဲ အပေါ်မှာ သူကြီး ပြောထားတဲ့ သတင်း ကို စိတ်မကောင်းစွာ နဲ့ ကြည့်နေ ပြီး စိတ်ထဲမှာ မကောင်းလိုက်တာ။
လူသတ်သမားက အိမ်က အဖေကို သတ်ပြီး အမေ့ရဲ့ ကျောင်းကို လိုက်လာပြီး အမေ (ဆရာမ)၊ အတန်းထဲ က ကလေးတွေ နဲ့ Staff တစ်ချို့ ကို သတ်ခဲ့တာ။
၅နှစ် ကနေ ၁၀နှစ် အတွင်း (may be all were 5Years) ကလေးတွေ အယောက်၂၀ အပြစ်မဲ့စွာ အသတ်ခံခဲ့ရတယ်။
သူကိုယ်တိုင် လဲ သူ့ဟာသူ သတ်သေခဲ့တယ်။
အိုဘားမား ပြောခဲ့သလို ဒီကလေးတွေ ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲတွေ၊ ကျောင်းဆင်းပွဲတွေ wedding day အတွက် သူတို့တွေ နဲ့ သူတို့ မိဘတွေမှာ အချိန်တွေ ဖြတ်သန်းဖို့ အများကြီး။
အနီးဆုံး ခရစ်စမတ်ပွဲ အတွက် လက်ဆောင်လေးတွေ ပိုင်ရှင်မဲ့ရှာပြီ။
လက်နက် တွေကို စိတ်ကြိုက် ကိုင်ခွင့် ပေးထားမှတော့ ဒီလိုမျိုး ရင်ကွဲစရာ တွေ ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါဘဲ။
ဆရာတွေ ကို ပြန်ခုခံ ဖို့ လက်နက်ပေးကိုင် မတဲ့လား။
အဲဒီထဲ က ဘယ်နှစ်ယောက် က ထစိတ်မဖောက်ဘူး ပြောနိုင်မလား။
ဒီလို နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အကြောင်းတစ်ခု ကို ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ အပြစ်မဲ့ သူတွေ အသေခံ နေရတာ မတရားပါဘူး။
လက်နက် ကိုင်ခွင့် ဥပဒေ ကို ပြင်သင့်တယ်။
လွတ်လပ်တိုင်း မကောင်းတာ နမူနာပါဘဲ။
မမ ရဲ့ Post ခေါင်းစဉ် နဲ့ ဒီသတင်း က ဝေဖန်ဖို့ အတော်သင့်တာပါဘဲ။
.. သမ္မတလည်း စတိန့်မန့်ဖတ်ရင်း… မျက်ရည်မဆည်နိုင်ဖြစ်သွားတာကိုး..။
Gun control က..အကြီးအကျယ်.. ဆွေးနွေးစရာတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့..။
2nd Amendment ကိုပါလာထိနေပြီ…
အမေရိကန်တွေကို.. သေနတ်တွေ.. လွတ်လပ်စွာပေးကိုင်စေချင်တာ.. ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေလေ..။
သေနတ် မည်သူမဆို.. လွတ်လပ်စွာကိုင်နိုင်ရတာကို ကြိုက်တယ်…
မြန်မာပြည်တောင်.. တနေ့နေ့မှာ.. အဲလိုဖြစ်စေချင်တာ..
ဒါဟာလဲ chaos theory ရဲ့ butterfly effect ဘဲ ဆိုရင်ဖြင့်
သေနတ် ကို လွတ်လပ်စွာကိုင်ခွင့်ရသ၍ မူးယစ်ဆေးတွေသုံးသူရှိသ၍
အဲဒီ နှစ်ခုကို ပေါင်းကြည့်ပါ။
သေနတ် ဆိုတာ အသတ်ကို လွယ်လွယ်လေးချွေယူလို့ ရတာ ကို လွယ်လွယ်ပေးထား ရင် ဒီလို အဖြစ်ဆိုးတွေ အမြဲရှိနေမှာဘဲ။
You can CHANGE it!!!!
(Gun control က..အကြီးအကျယ်.. ဆွေးနွေးစရာတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့..။)
ဖြစ်နေတာ ကြာပြီလို့တောင် ပြောချင်တယ်။
အသက်ဇီဝိန်ကို အလွယ်တကူ ပစ်ချွေသွားနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ လက်နက်ကို ဘာ့ကြောင့်များ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဦးဏှောက်နဲ့တော့ စဉ်းစားလို့ကို မရဘူး။ :eee:
ဘယ်လောက်ပဲ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ် ရင့်သန်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ် လူဆိုတာ ပုထုဇဉ်တွေ များပါတယ်။
လက်နှက်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ၀ယ်ခွင့်ရနေတာ…
အိမ်ရှင်မတယောက်ဟာ အသက်ကိုပါ ရန်ရှာမယ့် သူခိုးတယောက် အန္တရာယ်ကနေ
ဘဏ်မန်နေဂျာတယောက်ဟာ အကြမ်းဖက်သူတယောက် ရန်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်…
ဈေးဆိုင် ပိုင်ရှင်တယောက်ဟာ ဓားတစ်လက်နဲ့ သောင်းကျန်းနေတဲ့ စိတ္တဇ တယောက်ရဲ့ရန်ကနေ
ဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့ အသက်ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်…
ဒါတွေလည်း …ဇာတ်လမ်းတွေမဟုတ်လားဗျ …. လက်နှက်တွေ ကို လွယ်လွယ် ကိုင်ခွင့်ရနေတာ
ပြဿနာမဟုတ်ဘူး ..အနှီ လက်နှက်တွေကို ပေါက်ကရ သုံးနေတာပြဿနာ …
အနှီ လက်နှက်တွေကို မကိုင်ရ မဆောင်ရ ဆိုတာမျိုး ထုတ်ပြန်ပြန်ရင်လည်း အထက်က ပြောတဲ့
ဒရမ်မက်တစ် ပြည်သူ့ဘက်တော်သား ဇာတ်လမ်းတွေမြင်ရဖို့မရှိ…
Play with fire ဆိုတဲ့ အစ်ရှူးဖြစ်တာမို့ … Security case တွေ ကို ဇောင်းပေးသွားဖို့ လိုမယ် ထင်ပါ
ကြောင်း … စိတ်မကောင်းဘူး ဗျို့ …
(Play with fire ဆိုတဲ့ အစ်ရှူးဖြစ်တာမို့ … Security case တွေ ကို ဇောင်းပေးသွားဖို့ လိုမယ် ထင်ပါကြောင်း … )
လက်နက်ကြောင့် ရန်သူကို၊ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်လိုက်နိုင်တာတွေကြောင့် လက်နက်ပေးကိုင်သင့်တယ်ဆိုရင်…..
လုံခြုံရေးအရ လက်နက်ကိုင်ခွင့်ရသူတွေရဲ့ mental condition ကို ကားမောင်းခွင့်လိုင်စင်စစ်သလို နှစ်စဉ် (သို့) အချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ စစ်ဆေး နေသင့်တယ် ထင်တယ်။ :eee:
(အခုလက်ရှိတော့ စစ် မစစ် မသိလို့)
” ရုံးမှာအဲဒါပြောရင်း.. တချို့ငိုကုန်ကြတာ…
သမ္မတလည်း စတိန့်မန့်ဖတ်ရင်း… မျက်ရည်မဆည်နိုင်ဖြစ်သွားတာကိုး ”
သမ္မတ မျက်ရည်မဆည်နိုင်ဖြစ်သွားတာကို ၊ ဒါ လုပ်စားတာလို့ ခံယူမိတယ် ။
သူကြီးရဲ့ ရုံးကလူတွေ တချို့ ငိုကုန်ကြတယ် ဆိုတော့ကာ ။
အဲဒါကတော့ လုပ်စားတာ မဟုတ်ဘူး ။
ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလည်း ၊ လူ ( ကလေး ) သေတဲ့ သတင်းကြားယုံ နှင့် ။
အမေရိကန်တွေပဲ စိတ်နု / သိပ်ခံစားတတ်နေတာလား ။
အဘ စိတ်တွေပဲ သိပ် ကြမ်းတမ်း မာကြောနေပြီလား ။
ရွာသူတွေထဲက အဲဒီ ကလေး သေတဲ့ သတင်းကြားမိပြီး ၊
ငိုတဲ့သူတွေ ရှိရင် ပြောပြပါအုန်း ။
အဘ စိတ်ကို အဘ Evaluate ပြန်သုံးသပ်ရတော့မယ် ထင်တယ် ။
တကယ် ပြောနေတာပါ ။
ကျွန်မပြောတာကို စိတ်မဆိုးဘူးလို့ ယုံကြည်တာမို့ ပြောပါမယ်။
အိုဘားမားမှာ ကျောင်းနေဆဲ သမီးလေးတွေရှိတယ်လေ။
ငါ့သမီးလေးတွေများ လို့ ကိုယ်ချင်းစာလိုက်မိပြီး အတော်လေး ခံစားသွားတာနေမှာပါ။
သေချာတာက တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ သူ့မှာလဲ တာဝန်မကင်းပါဘူး။
ဒါကိုလဲ ခံစားသွားတာ ဖြစ်မှာပါ။
လူဆိုတာ နေရာတစ်ခု ကို မရောက်ဖူးဘူး၊ မရပ်ဖူးဘူး ဆိုရင်တော့ အဲဒီနေရာ ရဲ့ အခြေအနေကို အလွယ် ကိုယ်ချင်းစာနိုင်မယ်မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။
ဒီသတင်းမှာ ကိုယ့်သားသမီး ကို အင်မတန်ချစ်တဲ့ မိဘတိုင်း ရင်ထဲကို ထိပါတယ်။
ကျွန်မလဲ emotion ဖြစ်ပါတယ်။
သေသွားတဲ့ ကလေးတွေက မူကြို အရွယ် ၅နှစ် ဝန်းကျင် ဆိုတာ အင်မတန်ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ အပြစ်ကင်းသေးတဲ့ ကလေးတွေပါ အဘရေ။
သူတို့ ဘဝ မှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေတာပါ။
မိဘ ဆိုတာက သားသမီး အတွက် Plan တွေ အရှည်ချလို့ နေနေကြတာပါ။
ဒီ သားသမီးလေးတွေ ရဲ့ ဘဝ ဟာ သူတို့ ဘဝ ဖြစ်နေတာမို့ အဲဒီ နေရာကို ဝင်ကြည့်တတ်သူတိုင်း ခံစားရပါတယ်။
တရားရှိသူဆိုရင်တောင် ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရင် ထိန်းဖို့ အတော်လေးကြိုးစားရမဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။
အဲဒီ ကလေးတွေတင်မက အဲဒီ မြင်ကွင်း ကို မြင်လိုက်ရမဲ့ ကလေး တွေများရှိရင်လဲ သူတို့ရဲ့ ဖြစ်သွားမဲ့ စိတ်ဒါဏ်ရာ အတွက်လဲ ကျွန်မ ဝမ်းနည်းပါတယ်။
အဲဒီ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးတွေရော၊ တစ်ခြားသူများပါ ကောင်းရာသုဂတိလားကြပါစေ။
အပေါ်က အဘFRကို အနုတ်ပေးဒယ်
မျက်ရည်မဆည်နိုင်ဖြစ်တာ လုပ်စားတာလို့ ဆိုမယ်ဆို ဆိုချင်စရာပေါ့..
အရီးပြောသလို ငါ့သမီးလေးတွေများ လို့ ကိုယ်ချင်းစာလိုက်မိပြီး အတော်လေး ခံစားသွားရမှာတော့ အသေအချာပါပဲ..။
ကျနော်တို့ဆီမှာ ကလေးတွေ ဖမ်းခေါ်သွားတာ၊ ပျောက်သွားတာ၊ အသိလိုလိုနဲ့ အိမ်ထဲဝင် ချီသွားတာတွေ ကြားနေရတုန်းက ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ငါးသားလေးကိုများလို့ တွေးတာနဲ့တင်ကို စိုးထိတ်ဗျာပွေ…။
ခုလည်း ကလေးတွေသေသွားတာလို့ တွေးရင် ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ…အဲလောက်ပဲဖြစ်မလား..
အိမ်မှာ မိဘနဲ့အဆင်မပြေတာနဲ့ သေနတ်ဆွဲ ကျောင်းတစ်ခုကိုဝင် တွေ့ကရာ အပစ်မဲ့ကလေးတွေကို သတ်ကြတယ်လို့များ တွေးကြည့်ရင် (ဒီအဖြစ်မျိုးက ဒီတစ်နိုင်ငံတည်းမဟုတ်၊ ဒီတစ်ကြိမ်တည်းမဟုတ်..ဂျပန်မှာလည်း ဖြစ်ဖူးတယ်)
အဲလိုဆိုရင်.. မျက်ရည်မဆည်နိုင်ဖြစ်ရုံနဲ့ကို ပြီးသင့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်
ကလေးတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ညာခေါ်တာ၊ ဖမ်းသွားတာတွေကို ရေးပြမယ်ဆိုရင်…
ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ဗဟုသုတရလို့ ဆင်ခြင်သင့်တာ ဆင်ခြင်နိုင်တာပေ့ါ။
ကျမလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ငွေအလိမ်ခံရတာ၊ ခါးပိုက်နှိုက် လုယက်ခံရတာတွေကို ကိုယ်သိသလောက် ရေးဖို့ရှိနေသေးတယ်။ အကြွေးမှတ်ထားပေးးးးးးးးး
သဂျီးရဲ့ ကွန်မန့်နဲ့ မလတ်တို့ FR တို့ ဆွေးနွေးတာတွေကြောင့် ပိုစ့်က ပိုပြီး လေးနက်သွားတယ်။
မလတ်တွေးသလို အိုဘားမားက သူ့သမီးလေးတွေ အရွယ်မို့ ငါ့သားသမီးများဆိုရင်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ မျက်ရည်မဆယ်နိုင် ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် FRလည်း Evaluate လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သဂျီးပေးတဲ့ သတင်းကို ကြားပြီး ကျမလည်း စိတ်မကောင်းရုံကလွဲပြီး မျက်ရည်မကျလို့ပဲ။
ပြောရရင်တော့ တဏှာကြောင့်လို့ ဆိုရမယ်။
အနီးအဝေး လိုသလို ကွဲပြား ကွာခြားတတ်တာပေ့ါ။
ကျမအဖေဆုံးတော့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ဆရာတော်တွေ အိမ်ကို ကြွလာပြီး တရားဟောပေးကြတယ်။
ကိုယ်မသိတဲ့လူတစ်ယောက် သေတယ်ဆိုရင် ဘာမှ မခံစားရဘူး။
ကိုယ့်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဆိုရင် `အော် ဆုံးသွားရှာပြီလား´ ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်။
ကိုယ့်မိသားစုထဲကဆိုရင်တော့ အပူလုံးကြွ လူလုံးမလှ အိနြေ္ဒမဆယ်နိုင်အောင် အော်ဟစ်ငိုကြွေးကြရတဲ့ အထိပဲလေ။
ရွာထဲမှာ နေတဲ့ အလေ့အကျင့်ကြောင့် အမြင်မတော်တာတွေ့ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်တတ်လာတယ်။
၁။ လမ်းသွားရင်း လမ်းမပေါ်မှာ တောင်ပုံရာပုံ အမှိုက်ပုံကြီးတွေ့လို့ ရိုက်။
၂။ ကားလမ်းပိတ်ပြီး ကားရပ်ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်နေတဲ့ကားတွေ့တော့ မနေနိုင်ပဲ ရိုက်။
၃။ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်းတွေပါလို့ ပြောကြတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလှူလုပ်မုန့်ကျွေးပြီး စားပွဲတွေရှင်းတော့ မြင်ရတဲ့ အောက်ခြေကြမ်းခင်းကို ကြည့်မရလို့ ရိုက်။
(အဲဒါတွေကြောင့် ဘယ်တော့ ပြန်အရိုက်ခံ ထိမလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သတိပေးနေရတယ်။)
အဲဒါတွေ ရိုက်ထားမိပြီး ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့စကားကို ကြားတော့ ဒီပိုစ့် ဖြစ်လာတာပါပဲ။
အန်တီမမရေ တိုိတို ထိထိ မိမိ
စာရေးရ သက်သာသွားတာပေ့ါ။ :hee:
ဒ့ါထက် Comment ကို Reply ပြန်ရင် မေးလ် ၀င်ပြီလား မသိ။
comment လေးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးထားမှု လေးတွေဖတ်ရတာ ဗဟုသုတရပါ၏။
ကျနော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ Gazette ရွာမှာ ရွာသားတစ်ယောက် ဖြစ်ခွင့်ရတာ ဂုဏ်ယူမိပါ၏။
အိုဘားမား မျက်ရည်ကျတာ နဲ့ပတ်သတ်လို့ကတော့ အလွန်နှစ်သက်မိပါ၏။
ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့လဲ ထင်ပါ မြင်ပါ၏။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူ တစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိတိုင်းပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သား မှန်သမျှသည်
မိမိ၏ သားသမီးကဲ့သို့ မိမိ၏ ညီကိုမောင်နှမကဲ့သို့ မိမိ၏မိဘရင်းချာ ကဲ့သို့သဘောထားနိုင်မည်ဆိုလျှင်
ထိုကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်သူ တစ်ယောက်အား လေးစားမိပါ၏။
အကယ်၍များ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့လူ တစ်ဝက်လောက် အကုန်သေကုန်ကြမည်ဆိုလျှင် ထိုအထဲ
အူးသိန်းဆိန် ၏ဆွေမျိုးညာတိ တစ်ယောက်မျှ မပါလျှင် အူးသိန်ဆိန် မည်သို့ ခံစားရမည်ဟု
ဒီသူငယ် မေးရမယ့်နေရာ မှားနေတယ်။
သေနတ်ကိုင်ခွင့် ကိစ္စက မလွယ်ဘူးဗျ၊ အတော်ရှုပ်ထွေးတယ်၊ ကွန်နက်တိကက်လို တောနယ်ဖက်တွေမှာ အမဲလိုက်သေနတ်ကိုင်တာ အစဉ်အလာ နှစ်ပေါင်းရာချီနေပြီ။ နောက်ပိုင်းမှာ ခေတ်မှီမောင်းပြန်ရိုင်ဖယ် အတိုအရှည်တွေပါ ကိုင်လာတော့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ရင် တပြုံကြီးသေတယ်။ ရိုးရိုးအမဲလိုက် တတောင့်ခြင်းပစ် ရိုင်ဖယ်က အတွဲလိုက် ပစ်မရတာမို့ ဓားစာခံတွေ ပြေးချိန်ရတယ်။ တောနယ်ဆိုတော့ လူဆိုးသူခိုးရန် ကာကွယ်ဖို့ အိမ်တိုင်းသေနတ်လိုတယ်။
အမျိုးသားရိုင်ဖယ်အသင်း အဲဒီနယ်ဖက်တွေမှာ အားကောင်းတယ်၊ နိုင်ငံအဝှန်း အဖွဲ့ဝင် သန်းဆယ်ဂဏန်းချီရှိလို့ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ဩဇာလွှမ်းတယ်။ လက်နက်စက်ရုံတွေ အများကြီးရှိတော့ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ကုန်မဲ့ ပြသနာလည်းရှိတယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရတွေအတွက် ဝင်ငွေလည်းဖြစ်တယ်၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်း အကာကွယ်ပေးတယ်။ လက်နက်ကုမ္မဏီတွေဆီကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ရံပုံငွေ ရတာကိုး….။ အကယ်၍များ မဦးမချွတ် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်လာရင် တခါထဲ ကြမ်းပြင်ပေါ် ရောယောင်လှဲချ ဟန်ဆောင် သေလိုက်တာ အန္တရာယ် အကင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်။ အခုလို ဒီဇင်ဘာ ဈေးဝယ်ရာသီ ရှော့ပင်းမောလ်တွေ လူစည်ကားချိန် ဖြစ်လိုက်ရင် မချောင်ဘူး…။
လစ်ဘရယ်တွေလို့ ဆိုတဲ့လူတွေလည်း ကိုယ်လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ ဓလေ့စရိုက်ကို စွန့်ပစ်ဖို့ ခက်ခဲတာပါပဲ။
ရှေးစွန်းစွဲတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး လို့ ….. :eee:
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လူတစ်ယောက်ကို သတ်ချင်ရင် သေနတ်မလိုပါဘူး
သိန်း၃၀၀ လောက် နဲ့ကားတစ်စီး ပဲ လိုပါတယ်
အဲဒီ နှစ်မျိုးပြည့်စုံရင် ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး သေစေချင်တဲ့သူကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ သာ …
မန်းလေးက မောင်ပေ ဆိုတဲ့လူကို အရက်မူးအောင်တိုက်
မောင်ပေ အဲလောက်ထိ အစွမ်းထက်သလား :harr:
အမေမိုဘိုင်း မောင်ပေကို အချွန်နဲ့ မ နေတာလား။
လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အဲဒီလို လွတ်လပ်ရေးမျိုးဖြစ်မှာကို ကြိုတင်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ခုတော့လည်း…
အယ် အဲလိုလား…။ ဒါကြောင့်ထင်တယ် တန်ဆောင်တိုင်လပြည်နေ့ညက ကျွန်တော်ရဲ့ ဖရဲသီးဆိုင်ကလေး တစ်ဆိုင်လုံး ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းအောင်ပျက်စီးသွားတာ။ လွတ်လပ်လွန်းလို့ပေါ့လေ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့် ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကအစ စည်းမဲ့တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ နေထိုင်နေကြတာကလဲ
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလို လက်နက်ကိုင်ပြီး ပြန်ပေးဆွဲတာ။
(၁) လက်နက်ကို တရားဝင် ၀ယ်ခွင့်ရနေလို့။
(၂) စိတ်ဖြေစရာ နေရာ (ဖွင့်ပြောပြစရာနေရာမရှိလို့)
(၃) ဘယ်နေရာမဆို ကိုယ်လုပ်ရင်ကိုယ်စံ ကိုယ်လုပ်ရင်ကိုယ်ခံ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကြီးစိုးနေလို့
(ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကအစ စည်းမဲ့တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ နေထိုင်နေကြတာကလဲ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ထို့နည်း၎င်းမို့ ပြုပြင်ရမှာတွေ အများကြီးပါ။ :eee:
ဘယ်နိုင်ငံ၊ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် “လွတ်လပ်ခြင်း”ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နေရာတိုင်းအသုံးချဖို့မသင့်ပါဘူး။
အကောင်းတွေချည့်မရနိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာတွေမှာလဲ အဆိုးတွေချည့်တော့ဖြစ်မနေပါဘူး။
အနည်းဆုံး လူအချင်းချင်း (သို့)မိမိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရိုင်းပင်းကူညီ၊ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နှီးနှောမှု၊နွေးထွေးမှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်တဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုတော့ တည်ဆောက်နိုင်ကြသေးတာ တခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတွေထက် စာရင်ကျေနပ်စရာနည်းနည်းလောက်တော့ပိုမယ်ထင်ပါတယ်။
မမရဲ့ Free country
တဂျီးရဲ့ Free country
(အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလို လက်နက်ကိုင်ပြီး ပြန်ပေးဆွဲတာ။
(အကောင်းတွေချည့်မရနိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာတွေမှာလဲ အဆိုးတွေချည့်တော့ဖြစ်မနေပါဘူး။)
နိုင်ငံရပ်ခြား က လူတွေရဲ့ အသံတွေ ကြားရတော့ ….
ကိုယ်တွေက နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားသူငယ်လို ရုန်းမထွက်နိုင်လို့ ပိုကောင်းတဲ့နေရာတွေကို မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သလိုချည်း ခံစားရတယ်။
ကိုယ့်အတွက် သင့်တော်တယ်ဆိုရင် ကျေနပ်စရာပါ။
ကိုယ့်အထက်မှာထက် ကိုယ့်အောက်မှာ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း စိတ်ကို လေ့ကျင့်ဖို့ …..
ခင်မင်စွာဖြင့် သတိပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နန်းတော်ရာသူရေ။
သမ္မတကြီး ပြောသွားတာလေးကို နည်းနည်း ပြန်ပြောပြမယ်နော်
သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပြောသွားတယ်ထင်တယ်။
လွပ်လပ်မှု နှင့် တာဝန်ယူမှု လွပ်လပ်မှု နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရား ကို ယှဉ်တွဲ ကျင့်သုံးပြီး စည်းကမ်းရှိဖို့ နဲ့ တာဝန်ယူမှုရှိဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်
ပြည်သူပြည်သားတွေလဲ အဲဒီလိုလေး ရှိသင့်တယ် လို့ ထင်ပါတယ်
လွတ်လပ်မှုနှင့် တာဝန်ယူမှုဆိုတာကို တွဲထားနိုင်မှသာ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွတ်လပ်မှုအစစ်အမှန် ရရှိစေမှာပါ။ ထောက်ခံပါတယ် ရှုးဂါးကင်း။ :harr:
လူရဲ့တန်ဘိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆရာရင်းဆရာတော်သီတာရုံ (ပျံ်လွန်တော်မူပြီ:) မောင်အောင်ရေတဲ့ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် မရှိတာထက်မသိတာခက်လို့
အမြဲဆုံ:မလေ့ရှိတယ် (အဲတုံးကနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်း ကိုရင်ဝတ်ပြီ:စာသင်ရတယ်) မရှိလို့ဝမ်:မနည်ဲးနဲ့ မသိတာကမှဝမ်:နည်းရမှာကွတဲ့
များများရှိဘို့ထက် များများသိအောင်ကျိုးစားလို့ဆုံးမလေ့ရှိပါတယ် မရှိတာကဘဲ မသိကိုဖြစ်စေတာလာ: သိအောင်ကြိုးစားဖို့ဘဲ အခွင့်မ’ရတာလား
ဘယ်မှာဘဲနေနေ ဘယ်ဘဝဘဲရောက်ရောက် ဆင်ခြင်တုံတရာ:ရှိရင် လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေး ဘယ်နိုင်ငံခြာ:သားမဆို လက်ခံသဘောကျတလေး
တစားဆက်ဆံတတ်ပါတယ် ဖြစ်သလိုနေမယ် ထိုင်မယ်ဆိုရင် သူများရီစရာအဖြစ်တွေဘဲ ကျန်နေတတ်ပါတယ် အစစစည်းကမ်:ရှိဘို့ လစ်ရင်လစ်သလို
မလုဎ်ဘဲ လိုက်နာတတ်တဲ့အကျင့်လေးဖြစ်ဘို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဘိုးထားတတ်ဖို့ ဘဲလိုမယ်ထင်ပါကြောင်း
ဆရာကောင်း သမားကောင်းနဲ့ တွေ့ပြီး အဆုံးအမကောင်းတွေ ရခဲ့လို့ အခုလို ဘ၀ရေစီးကြောင်းမှာ ရေပေါ်ပေါ်တဲ့လူ ဖြစ်တာဖြစ်မယ်။
မမရေ လွတ်လပ်တဲ့အထဲမှာ Freedom form Fear က အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။
စောစောက ဟိုဘက်က သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောမိတော့ သူတောင် ငိုတယ်တဲ့ သတင်းကြည့်ပြီးတော့ ။ ကလေးအမေတယောက်ငိုတာမြင်ပြီး စကားကိုမပြောနိုင်အောင် ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုမိတာပါတဲ့ ။
ကျမဒီက ကိုယ်တော်တွေ မီးလောင်ဒဏ်ရာကြည့်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲရသလိုနေမှာပေါ့။
သေနတ်တလက် ဒေါ်လာ ၂၀ ၊ ၃၀ လောက်နဲ့ရနေတော့ လူတိုင်းဝယ်ကိုင်နိုင်နေတာက ပြသာနာ။
Freedom from Fear ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို အရမ်း သဘောကျတယ်။
အဲဒီ Freedom မျိုးပဲ ကောင်းတယ်။ :hee:
လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရတာ လွတ်လပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး..။
ခံစားသင့်တာတွေ ခံစားခွင့်ရှိတာ တွေကို ဆိုလိုတာပါ..။
အဲဒီမှာ (သင့်) ဆိုတာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကာလ ဒေသ ခေတ်အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေတာကို ဆိုလိုတာပါ။
အခြားလူမျိုးက လာကျွန်မပြုလဲ ၊ လာမချုပ်ချယ်လဲ ၊ လာမနှိပ်စက်လဲ
အခွင့်အရေးတွေ အပြန်အလှန်ချိုးဖျက်နေသရွေ့ အားပါးတရ ချိုးဖျက်နေသရွေ့
အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အနိုင်အထက်ပြုရမ်းကားနေသရွေ့
ဓလေ့ + စရိုက်ဆိုးတွေရဲ့ကျေးကျွန်အဖြစ်
အတ္တရဲ့ ကျေးကျွန် ဆိုပါလား။
ဦးပါရေ- စကားလုံးအသုံးအနှုံးလေး ကြိုက်တယ်။
အမှတ်မမှားရင်..အရွယ်ရောက်သူတွေ.. လွတ်လပ်စွာ သေနတ်ကိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်နေတာ.. ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေပါ..။
လစ်ဘရယ်ကလည်း.. သေနတ်ကိုင်ခွင့်ရှိသင့်တယ်လို့.. ယူဆထားကြပါတယ်.။ ဒါပေမယ့်.. အော်တိုမစ်တစ်သေနတ်တွေကို.. နည်းနည်းထိမ်းရောင်းကြဖို့.. ဒါမှမဟုတ်.. သာမန်လူတွေကိုင်ခွင့်လုံးဝပိတ်ပစ်ဖို့.. အကြီးအကျယ်ဒီဘိတ်လုပ်နေတာလို့.. မြင်မိတယ်..။
ဒါကြောင့်ပဲ.. ယူအက်စ်မှာ.. အင်အားကြီးသူကို.. ငါမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့..”သခင်စိတ်” အခြေခံရခဲ့တာမို့ပါပဲ..
သေနတ်ကိုင်ခွင့်ရှိတာကြောင့်.. ကယ်ခဲ့..ကယ်နိုင်ခဲ့တဲ့..အသက်တွေ.. မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ..
အမေရိကန်အစစ်တွေ၇ဲ့..မူရင်းစိတ်မှာ.. ကောင်းဘွိုင်ခေတ်ကလို.. စိန်ခေါ်သေနတ်ယှဉ်ပစ်တဲ့..စိတ်ဓါတ်ရှိတယ်..
ဒါက.. သူလည်းသေနတ်နဲ့.. ကျည်ဆံနဲ့.. ကိုယ်လည်း.. ဒါပဲ.. သာသူနိုင်စတမ်း… လက်ရုံးရည်ယှဉ်တာမျိုးပေါ့..
လူသားချင်းတန်းတူညီမျှစွာ.. ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်စေတဲ့.. စိတ်ဓါတ်ကိုရတယ်..။
ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲ.. ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေမှာ.. လေယဉ်မသုံးရ.. ကမ်မစ်ကယ်မသုံးရ.. အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေစေတဲ့..လက်နက်ကြီူးတွေမသုံးရ.. စတာတွေဖြစ်လာတာပေါ့…။
KNU တွေ (အထင်- ခရက်ဒစ်တူ ဘပု) မြ၀တီမှာ သေနတ်ကိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြကြမယ်။
သူတို့ကို မပစ်ရင် သူတို့လည်း မပစ်ဘူးတဲ့။
Green Rose အမြင်တော့ လက်နက်ဆိုတာ စည်းကမ်းတကျ ကိုင်မှကောင်းပါတယ်။ လက်နက်ကို အသုံးချတတ်မှ၊ အသုံးချရဲမှလည်း ကိုင်သင့်ပါတယ်။ နို့မို့ ရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်လက်နက်က သူ့လက်နက်ဖြစ်သွားမှာ ပါ။ (ဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့ မသိဘူး လက်နက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး သိတာလေး ၀င်ပြောတာ :mrgreen:)
တစ်ခါတစ်ခါ အကောင်းအဆိုး ဆိုတာ ကြိုတွက်လို့မှ မရတာကိုး။ အခု၊ တော်ကြာ၊ နောက် ၁၀ နှစ်စာ ကောင်းမယ်ထင်ရပေမယ့် နောက် ၁၁ နှစ်ကြာတဲ့အခါ အဆိုးဖြစ်သွားတာမျိုးလည်း ရှိတယ်လေ။ America မှာလည်း ခုလို ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ မထင်ခဲ့လို့ လက်နက်ကိုင်ခွင့် ပေးထားတာလေ။ နောက်တစ်ဖက်က ပြန်တွက်ရင်လည်း လက်နက်ကိုင်ခွင့်မရှိရင် ခုလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး မတွေ့ဘူးဆိုတာ သေမှမသေချာတာ။
သူကြီးရဲ့ အဆိုကို ထောက်ခံချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလောလောဆယ် အနေအထားအရတော့ Green Rose တို့မြန်မာပြည်မှာ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရှိသင့်ပါဘူး။ စိတ်ဓါတ်တွေ အဆင်သင့်မဖြစ်ကြသေးပါဘူး။ သူများပေးတဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့မပြောနဲ့ ကိုယ့်အန္တရာယ်တွေကိုတောင် ကိုယ်တိုင် ပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်စားနေကြတာလေ။ ဘယ်ဟာက အန္တရာယ် ရှိတယ်၊ ဘယ်ဟာက အန္တရာယ် ကင်းတယ်ဆိုတာ ခွဲခြားနိုင်လာကြတဲ့တနေ့ကျရင်တော့…..
(စိတ်ဓါတ်တွေ အဆင်သင့်မဖြစ်ကြသေးပါဘူး။ ) ဆိုတာကို ထောက်ခံတယ်။
လက်နက်ကိုင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ကို ၉ လို့ သတ်မှတ်ရင်….
အခုပြည်သူတွေ (ကိုယ်ပါ ပါတယ်) ရဲ့ စိတ်ဓာတ်က ၁ လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။
အများသုံး နေရာတွေ ဖြစ်တဲ့ အိမ်သာ၊ ဘတ်စကားဂိတ်တွေ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ သုံးပြီး ပျက်စီးတာ၊
ဘယ်နေရာမဆို တန်းစီပြီး စနစ်တကျ ကိုယ့်အလှည့်ကို စောင့်တဲ့ စိတ် မရှိတာတွေကိုတောင် အများကြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြရအုံးမှာပါ။ :buu:
မြန်မာပြည်က.. လက်နက်ကိုင်သူပုန်တွေရှိနေတာ…။ စစ်တပ်ကလက်နက်နဲ့.. အနိုင်ကျင့်လွန်းနေတာ…စတာတွေကြောင့်
သာမန်လူတွေအတွက်.. အနာဂါတ်သိပ်အခြေအနေမကောင်းဘူး..။ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံးတိုင်းပြည်၂ခုကြားရောက်နေတာလည်း.. ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့..အခြေအနေ..။
မြန်မာတိုင်း.. လက်နက်ကိုင်ပိုင်ခွင့် ရှိရမယ်ဆိုတာ.. အဲဒီလာတော့မယ့်.. အရိပ်မဲတွေကို.. တုံ့းပြန်နိုင်ဖို့ပြင်ထားတဲ့သဘောပါပဲ..
သူတပါးအားကိုးမှီခိုရတာတွေ.. . အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေ..အရမ်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်.. မှန်းဆမိလို့ပါ…။
မြန်မာတွေရဲ့.. ဓလေ့..အကျင့်နဲ့တော့.. လက်နက်ရရင်..
“အောင်မြလေး”.. ဖြစ်သွားနိုင်တာလည်း.. ထည့်တွက်ရမှာပါ…
လွှတ်မချလည်း.. လွတ်ကျသွားအောင်.. လက်နက်လေးတပ်ပေးလိုက်ရင်.. အဆင်းဘီးတပ်တာ..ဖြစ်သွားမလား.. မြန်မြန်လေး.. ကျိန်စာလွတ်သွားမလားပါပဲ..
ရောဂါဖြစ်လို့ ပျောက်စေ ဆရာဆီသွားသလို ဖြစ်နေအုံးမယ် သဂျီးရယ်။